I-Look and Sound of "Bosch" (isihloko 2 se-3) - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ukubukeka Nokuzwakala "Bosch" (isihloko 2 se-3)
UTitel Welliver njengoHarry Bosch endlini yakhe ebheka iLo ebusuku, isibonelo esihle Boschs classic ifilimu black look.
Isihloko sokuqala kulolu chungechunge sigcizelele ukuthi, njengoba nje amanoveli kaBosch kaMichael Connelly aqhubeka nenkolelo yamaqiniso aseMelika ephikisayo, enzima kanzima aphethwe yi-Raymond Chandler noDashiell Hammett, ngakho-ke ama-Amazon Prime Video Bosch uchungechunge lwethelevishini luqhubeka nokubukeka okumnyama, okubukeka kwe-classic ifilimu yomuntu. Futhi abantu ababili abanomthwalo wemfanelo wokuqaphela ukuthi i-Black feel i-DPs yesiShayisihlanu, uMichael McDonough (ASC, BSC, AMPAS) noPatrick Cady (ASC), bobabili abahlukile kulolu chungechunge.
UMcDonough, owavuma ukuxoxwa naye, waqala ukwenza i-cinematography yabaqondisi befilimu abanjengoDavid MacKenzie, Rodrigo Garcia, uTerence Davies, uStephen Frears, uMichael Radford noLawrence Kasdan. Ubuye waba nemibono eminingi neDebora Granik, owayengumfundi wase-NYU wangaphambili, okuphawulekayo I-Bone's Winter, eyathola ezine Academy Award Ukuphakanyiswa kufaka phakathi isithombe esihle kakhulu. Ngaphezu kwe Bosch, UMcDonough uye waba yi-DP Downton Abbey futhi Mesabe Abafileyo Abahambayo.
UMcDonough wachaza ukuthi uyasondela kanjani Boschs atmosphere black. "Isici esithile Bosch lokho esikusebenze kuye kwaba yiLa ebusuku, "esho. "Kunomuzwa othize emzini obuyela kumafilimu afana nawo Heat futhi Collateral kanye nesifiso se-nostalgic sokukhanyisa ebusuku sodium kwedolobha elisheshayo ukushintsha kube yi-LED streetlight blandness. Sisebenza kanzima ukugcina lo mqondo wamazinga okushisa amaningi ombala kanye nezinhlobonhlobo ze-neon eziza ne-LA ukuzizwa ebusuku. Siphinde sasebenza ebumnyameni bemizimba yangaphakathi kanye neminyaka eminingi futhi samukela umsindo ongafika ngokusebenza emazingeni aphansi ekukhanyeni ukuthuthukisa lo mqondo wokuzikhandla. Sibheke okuningi emlandweni omnyama wedolobha kanye nemifanekiso yayo yeSikhathi Sine lapho sisebenzisa kakhulu izindawo zakudala endaweni yedolobha. "
Ngenkathi yesihlanu, leli qembu lenze inqubo ehlukile. "Ngonyaka odlule, sithonywe ikakhulukazi I-French Connection ngokuphathelene nokuthungwa, futhi nomqondo wokubheka nokuqapha okuhambisana nezindaba zethu eziyinhloko ngonyaka odlule, "kusho uMcDonough. "Kukhona njalo i-hook ebonakalayo, ephakanyiswa yizikripthi zokuqala, ezenza njengezulu lethu elinalo ekunqumeni ukubukeka okufanele.
"Ngonyaka wesihlanu, sashintsha kusuka ku-RED Dragon kuya ku-RED Weapon nge-Monstro sensor. Manje sidubule i-6K ngokukhipha kwe-5K evumela ukuphepha okubonakalayo okwedlulele kubasebenzisi, futhi manje sisebenzisa i-8: ukucindezela kwe-1 ukuze ukuphela kokuthunyelwe kusebenze ngemininingwane efanayo kakhulu lapho sisebenzisa iDragons ku-5K ngokukhipha kwe-4K. Ukuqapha kwethu kokusetha kwenziwa ngokusebenzisa ezimbili Sony I-PVM254 25 "Izibukeli ze-OLED. Sisebenzisa i-LUTs yethu kulabaqaphi besebenzisa i-switcher ne-Odyssey 7Q Plus i-monitor / amarekhodi abambelela ku-36 LUTs futhi asebenze njengabaqapheli bamanga bamanga.
"Sisebenzisa i-LED eningi manje njengoba sihlala ezindaweni ezintathu noma ezine kunoma yiluphi usuku olunikeziwe, futhi sizungeze edolobheni besebenzisa amaloli ensimbi, futhi kuthinta kokugcina noma yikuphi ukusetha, njengokukhanya kwamehlo noma I-close-up ivame ukutholakala nge-unit compact ibhethri enikwe amandla nge-LED. Ebusuku obungaphandle, sivame ukusebenzisa ama-sodium wangempela ezindaweni ezimbonini ezisezimbonini ezikhanyisiwe noma ezikhondweni. Kanye nokuthi sizoxuba i-tungsten ne-HMI namaphakheji avamile we-gel angase afake ezinye i-vapor yezimboni noma i-cyan. "
Ngabuye ngabuza uMcDonough ukuthi kusetshenziswe umbala wekhodi ngemuva kokukhiqiza ukufeza Boschukubukeka okuhlukile. "I-Red Raw footage-Red Wide Gamut Log3g10-isetshenziswe ku-Warner Bros Imaging Imaging Motion. Amadayimane adluliselwa ku-MTI Cortex kanye nama-LUT kusuka kusethi asetshenziselwa ukwakha umfanekiso we-Rec 709 nama-LUT 'aphekwe'. Sirekhoda ku-6K ngokukhipha kwe-5K naku-8: ukucindezela kwe-1, ukuvumela indawo yokuphepha yomqhubi wekhamera, ukuvumela ukuhlala phansi, futhi uma kudingeka ukukhulisa isibhamu, sisebenzisa yonke indawo yesithombe se-6K. Amafayela we-DNX 36 adalwe ukuhlela nge-LUTs esetshenzisiwe ne-Synced Sound nguJesu Borrego.
"Umbala wombala uScott Klein wenza iphasethi usebenzisa i-LUTs yethu njengesiqondiso. Ama-LUT asethiwe adalwe ngaphezulu kwezinkathi ezinhlanu zokugcina. UScott, nomsizi u-Ara Thomassian osebenza ngombono omnyama we-Da Vinci Resolve. Ukudlula okubili kokugcina kwenziwa ngumkhiqizi ophezulu uPieter Jan Brugge kanye noyedwa we-DPs, mina noma uPatrick Cady, abakhona. Omunye ube 'Ukubeka Ukubukeka' kanti enye 'Umbala Wokugcina.' Sithumela ku-SD-Rec709 Prores422HQ ku-UHD. Kudlula i-HDR-i-Rec2020PQ-iqondiswa uScott. Wethu Bosch Ithimba leposi leMkhiqizi uMark Douglas, uMqondisi wePosita Tayah Geist, noMqondisi wezokuPhatha u-Erika Shea ubheka izinto ngokuhle futhi asekelwa kuWarners ngumphathi wephrojekthi uMichael Holland. "
Iningi labo Bosch iqoshwe ezindaweni zangempela ngokuphambene nemisindo yezwi (okuhlukile okuphawulekayo ukuthi ukuzijabulisa okuyiqiniso okuyiqiniso Hollywood esiteshini samaphoyisa esivela kakhulu kulolu chungechunge). Kodwa kwakukhona esinye isiqalo esiyisikhathi esiyisihlanu esidinga indawo yokubeka studio, ingaphakathi lendiza encane lapho uHarry Bosch elwa khona nokufa ngezikhathi ezimbili eSigabeni 8 "Salvation Mountain." UMcDonough wenza imininingwane ngokuklama kwalolo . "Ekuqaleni kokukhiqiza, sasihamba indiza e-Twin Otter indiza futhi sahamba ngemibuthano ezindaweni ezihlukahlukene ezizungeze i-Salton Sea ukuze sizizwele isenzo esasizokudlulisela kuso esiteshini. Iqoqo ngokwayo empeleni laliyisimo esifanele sokulingana nezilinganiso ezindizeni yangempela. Kwakubalulekile ukuthi kusobala ukuthi sasizizwele lapho, sizama ukugcina ibhalansi njengoba indiza iphikisiwe futhi sizama ukuthatha indawo ngekhamera eziphathekayo.
"Isethi yayiyizinga eligcwele futhi lihlelwe ku-gimbal ekwakheni ukuhamba futhi, ukuze sikwazi ukubeka ezinye zekhamera ezithuthumayo, sinezigaba ezungeze amawindi angakwazi ukuziphindisela wona futhi avumele ikhamera ukuba iphume njengoba idingekayo futhi usinike ikamelo elincane lokusebenza. Sanezela i-T12 engxenyeni yekhwele yokugibela ukuthuthukisa ukuhamba kwelanga eduze nokuguquka okuqinile namabhange we-fuselage. "
Kusukela iningi la Bosch lifakwe endaweni, ilungu elilodwa elibaluleke kakhulu lethimba liyi-manager ephethe indawo uPaul Schreiber, owakhuluma nami ngeminikelo yakhe embukisweni. U-Schreiber waqala ukuqala njengesikhala sendawo eChicago, kodwa njengoba esho, "Ngangidonsela phambili e-Los Angeles ku-1994 inyanga, ukuhlola izinto. Ungalokothi ushiye. Ukunciphisa izenzakalo ezikhethekile ezikhangisweni, ithelevishini kanye nezici, ngihlola, ngifuna futhi ngishaye-ikakhulukazi eSouth California ngifuna ukuthola izindawo ezifanelekayo ezithinta iskripthi neskripthi, njll "
U-Schreiber wangidabula ngenqubo yesinyathelo ngesinyathelo somsebenzi wakhe. "Kuyinto yokwenza umdlalo owenzela umdlalo odinga ukuhlolisisa ubuciko-isakhiwo se-cinematic; ukwahlulela okusebenzayo-isabelomali, ukuvumela, ukugcinwa kwempahla yabasebenzi abakhiqizayo, imishini, nezimoto; ulwazi lwe-geography, i-demographics, ukuklanywa, ukuqonda umlando-ukuthi idolobha lakhiwa kanjani; i-economics; psychology-ukuthola izimvume; kanye nokucatshangelwa okuphawulekayo kwesimiso sokukhiqiza. Futhi ngezikhathi ezithile umuntu uthola umthamo onempilo womlingo kanye / noma inhlanhla.
"Into yokuqala engiyenzayo iwukulahla zonke izinto engisanda kubhala bese ngifunda iskripthi. Njengokufunda incwadi, amagama abeka isithombe engqondweni yami. Khona-ke izinto ezibalwe ngenhla ziqala ukukhahlela. Ngezinye izikhathi umklami wokukhiqiza, umqondisi, umkhiqizi uzonikeza isiqondiso, njalo nje ukuchaza isitayela noma inkathi nokunye okunye. Ngemuva kwezinkathi ezinhlanu zonyaka Bosch, Nginomqondo omuhle walokho wonke umuntu abukeka futhi okuzosebenza.
'Ukudutshulwa kulandelayo. Ukuthola nokuthatha izithombe ngokuphoqelela futhi ukufezeka izinketho zilandelayo. Ezinye izindawo zitholakala kangcono usebenzisa i-Google Amamephu, ezinye kusukela ekuhlangenwe nakho okudlule, ezinye kusuka ekusesheni izindawo ezithile. Izingxoxo, izingxoxo, iziphakamiso, nenhlanhla sonke zisetshenziselwa ukuthola imvume yezithombe ezikhona zokuqopha izindawo. Ukuvota, ukuvota, ukuvota ... Uma kungenakuqothulwa kuleli sigaba, ngibonisa izithombe. Imikhiqizo ehlukene inezindlela ezahlukene zokubheka ukuthi ubani obani, futhi ubani okhetha ukukhetha. Ngezinye izikhathi kubonakala sengathi ukusebenzisana, ngezinye izikhathi kuncane kangaka. "
Ngokuqondene nokuthi yiziphi izimfanelo azibukeka endaweni, uSchreiber uchaze izidingo ezidingekayo endaweni ethile. "Kungakhathaliseki ukuthi indawo isekela indaba nezinhlamvu. Ingabe ihambisana nesithombe engqondweni yami eyenziwe yesikhala ngenkathi ifunda iskripthi? Izingoma ezikhangayo-ingabe kukhona ukubukeka okuthakazelisayo? Ngaso sonke isikhathi sizithoba, futhi asinaso isikhathi lapha. Izingozi-azipheli: Iziphazamiso ezibonakalayo ezingase zenze ukugxila kwezinto ezingaphakathi ukukhiqiza ifilimu uhlaka. Uma kukhona ikhaya elingaqondakali elingasemuva kumuntu ozobe ekhona 'ekhaya,' kungase kuphazamise umbukeli. Sifuna ukuthi ziphathwe ngekhasi leskripthi. Noma yini engasisondeli kulo mgomo ingase ibe ukukhetha okungalungile. Ababukeli-uma ukurekhoda inkhulumomphendvulwano yesigcawu, lokhu okulandelayo kungaba inkinga: Izindawo ezakhiwe eziseduzane, ama-junkyards, izindawo zokulawula izilwane, izikole, ithrafikhi, noma umshayeli wamapulangwe ekwakhiweni kwesitolo se-flagship yaseB Banana Republic eduze komnyango lapho sasiba khona ukuqoshwa okubangele umqondisi uRob Reiner ukukhamuluka wathi, 'Isiphi isihogo esiyilo ?!' Zijabulise izikhathi ukuze uqiniseke. Futhi-ke kukhona izimvume. Indawo yokuqopha yizwe langempela, hhayi i-soundstage. Ukuthembela ekusebenzisaneni ukulawula isikhala sokuqopha. Ukuthola imvume yokwenza umthamo wokukhiqiza ukuhlala impahla yangasese kanye nomphakathi kungaba yinto yokusebenza, futhi ngezinye izikhathi, akunakwenzeka. Ngaphambi kokutshala isikhathi nentshiseko ekukhethweni, ngiyacabangela amathuba okuphumelela. "
Ngabuza uSreiber uma esebenzisa noma yikuphi isofthiwe ethile ukugcina ithrekhi yezindawo ezihlukahlukene azikhethele umsebenzi wendawo. Waphendula. "Ngihlela amafayela afana nekhabhinethi yokufaka; amafolda, neqembu lama-sub-folders. Ingqondo yami isebenza kahle nge geography futhi ngivame ukukhumbula kahle lapho kukhona khona. Ngicabanga ukuthi ukusesha okungcono kwamagama angangisiza, kodwa angikaze ngibe nesikhathi. Amawindi amaningi weGoogle Maps avame ukuvuleka kwideskithophu yami nganoma yisiphi isikhathi esithile. Uhlelo lokusebenza lwe-batch-resizing olulula lwama-zillions ezithombe-ngokuvamile ze-500 izithombe ngosuku olugijima ngekhamera yami. Ukumisa isithombe kusetshenziselwa ukuvame kakhulu, kepha sisuka kulokho. Ngesikhathi amaphoyinti ebukeka emuhle, sekuyisikhathi esiningi kakhulu. Emkhakheni ngezikhathi ezithile, ngizokhipha umzila wami we-Sun ap. "
I-Amazon Prime Video AMPAS ASC Bosch BSC Collateral Downton Abbey Mesabe Abafileyo Abahambayo HEAT i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw I-LUTs UMichael Connelly Red I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Sony Ama-spears nama-Arrows I-French Connection Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum Warner Brothers	2019-06-07
Ngaphambilini: I-Chesapeake Systems Yengeza u-Amy Lounsbury kuya e-Southwest Team
Olandelayo: Umbono Wekhompyutha & Imiphumela Ebonakalayo Ingosi Eyinhloko